အလုပ်အကိုင် ရှင်းလင်းပွဲ နှင့် အင်တာဗျူး ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ် – YANGON STYLE
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုသည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် မြန်မာလူမျိုးအိုင်တီ အင်ဂျင်နီယာ (IT engineer) နှင့်
စက်မှု အင်ဂျင်နီယာ (Mechanical engineer) ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ၇ လပိုင်း သို့မဟုတ် ၈ လပိုင်းတွင် ရန်ကုန်၌ လုပ်ငန်းအကြောင်း ရှင်းလင်းပွဲ နှင့် အင်တာဗျူးကို ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်။
အင်တာဗျူး အောင်မြင်သူများကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ် ခန့်အပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။အလုပ်အတွေ့အကြုံ ရှိပြီးသူများသာမက ကျောင်းပြီးခါစ အလုပ်အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသူများပါ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အမြဲတမ်းခန့် ဝန်ထမ်း လစာ…….220,000 ယန်း (မြန်မာငွေ ကျပ် သိန်း ၃၀ ခန့်)
(ဂျပန်စာ N2 အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။)
(အထက်ဖော်ပြပါ လစာ ပမာဏသည် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ အတိုးအလျှော့ ရှိမည်။)
※အမြဲတမ်းခန့် ဝန်ထမ်း အဖြစ် ခန့်အပ်ခံရပါက အပိုဆုကြေး (Bonus)၊ လစာတိုး ခံစားခွင့်ရှိမည်။
ထို့အပြင် စာချုပ်သက်တမ်း နှစ်ကန့်သတ်ချက် မပါဝင်ဘဲ စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်မည်။
.စာချုပ်သက်တမ်းဖြင့် ခန့်အပ်မည့် ဝန်ထမ်းလစာ……220,000 ယန်း (မြန်မာငွေ ကျပ် သိန်း ၃၀ ခန့်)
(ဂျပန်စာ N3 အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။)
※အလုပ်ဝင်ပြီးနောက် အရည်အချင်းပေါ် မူတည်၍ စာချုပ်သက်တမ်းဖြင့် ခန့်အပ်ခံရသည့် ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ အမြဲတမ်းခန့် ဝန်ထမ်း အဖြစ် တိုးမြှင့်ခန့်အပ်ခံရနိုင်မည်။
(Training ကာလရှိမည်။ အလုပ်ဗီဇာ ရရှိရန်အတွက် ကုမ္ပဏီဘက်မှ တာဝန်ယူမည်။)
【မဖြစ်မနေ ရှိရမည့် အရည်အချင်းများ】
①ဂျပန်စာဖြင့် N3 Level နှင့်အထက် ညီမျှသော Communication ကောင်းစွာ ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်လို Communication ကောင်းစွာ ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။
(ဂျပန်ဘာသာစကားဖြင့် အင်တာဗျူး ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ဂျပန်လို အင်တာဗျူး ဖြေဆိုနိုင်သူများသာ လျှောက်ထားစေလိုပါသည်။)
②တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုတွင် IT သို့မဟုတ် Mechanical မေဂျာကို သင်ယူလေ့လာဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။
၅ လပိုင်းနှင့် ၆ လပိုင်းတွင် လျှောက်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးပြီးနောက်၊ SKYPE ကို အသုံးပြု၍ ဂျပန်ဘာသာစကားဖြင့် အင်တာဗျူး ၂ ကြိမ် မှ ၃ ကြိမ် အထိ ပြုလုပ်မည်။ ထို့နောက် ရန်ကုန်တွင် အင်တာဗျူး နှင့် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းပွဲ၊ အင်တာဗျူး ထပ်မံပြုလုပ်မည်။
★★SKYPE ဖြင့် ပြုလုပ်သော အင်တာဗျူး အောင်မြင်သူများသာ ရန်ကုန်တွင် ပြုလုပ်မည့် အင်တာဗျူးနှင့် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းပွဲ နှင့် အင်တာဗျူးကို တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။★★
ယခုအခါတွင် ရန်ကုန်တွင် အင်တာဗျူး နှင့် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အစီအစဉ် ရေးဆွဲနေဆဲ ကာလဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ထပ်မံ၍ ကြေညာမည် ဖြစ်ပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော ထမဖြစ်မနေ ရှိရမည့် အရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ Link မှ တစ်ဆင့် စာရင်းပေးသွင်းထားနိုင်ပါသည်။ ထိုစာရင်းပေးသွင်းထားသည့် အချက်အလက်များကို ဂျပန်ဘက်ရှိ အလုပ်ခန့်အပ်မည့် ကုမ္ပဏီထံသို့ ပေးပို့မည် ဖြစ်ပါသည်။
အင်တာဗျူးမတိုင်မီ ထိုစာရင်းသွင်း အချက်အလက်များမှ တစ်ဆင့် အရွေးချယ်ခံရသူများထံသို့ မပြည့်စုံ မရှင်းလင်းသည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါက မြန်မာတာဝန်ခံမှ တစ်ဆင့် ဖုန်းဆက် မေးမြန်းမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ယခုအခါတွင် ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ဆဲ ကာလဖြစ်ပါသဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံဘက်ရှိ ကုမ္ပဏီ အခြေအနေပေါ်တွင် မူတည်၍ သတ်မှတ်ကာလထက် နောက်ကျနိုင်သည့် အခြေအနေလည်း ရှိပါသည်။ အကယ်၍ နောက်ကျမည့် အခြေအနေရှိပါက ထပ်မံ၍ ကြေညာပေးပါမည်။)
. . 【ထလျှောက်ထားရမည့် Link】
လျှောက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီနာမည် [Application to which company ?] ကို ထည့်သွင်းသည့်အခါတွင်
1. IT Engineer ရာထူးအတွက် လျှောက်ထားသူသည်
[JS20190517IT] ဟု ရေးသားဖော်ပြ၍၊
2. Mechanical Engineer ရာထူးအတွက် လျှောက်ထားသူသည်
[JS20190517Mechanical] ဟု ရေးသားဖော်ပြပေးပါရန်။
🔹အောက်ဖော်ပြပါ လင့်မှ တစ်ဆင့် လျှောက်ထားပေးပါရန်။🔹
(မှတ်ချက်…ဂျပန်စာ Level ဖြည့်စွက်ရာတွင် ဂျပန်စာ စာမေးပွဲ အမှန်တကယ် အောင်မြင်ပြီးသော Level ကိုသာ ဖြည့်စွက်ရမည်။ လက်ရှိ သင်တန်း တက်ရောက်နေဆဲဖြစ်သော Level ကို (လုံးဝ) မဖြည့်စွက်ရပါ။)